Howlgalo aan caadi ahayn oo maanta ka socda magaalada Kismaayo iyo dad lagu soo qabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Howlgalo aan caadi ahayn oo maanta ka socda magaalada Kismaayo iyo dad lagu soo qabtay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamada booliska iyo kuwa nabad-sugidda maamulka Jubbaland ay maanta halkaasi ka sameeyeen howlgal ay dad badan kusoo qab-qabteen.
Ciidankaan oo maanta guri guri u galaya xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inay gacanta kusoo dhigeen illaa 10 qof oo ku eedeysan inay falal amniga ka dhanka ah ka wadeen magaaladaas.
Sidoo kale, dad goob-joogayaal ah oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in dadka lasoo qabtay ay ahaayeen dad ku howlanaa inay dhac u geystaan dadka shacabka ah islamarkaana qaati laga taagnaa.
Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland ayaa todobaadkii lasoo dhaafay soo saartay ammar ku aadanaa in lasoo qabto cid walbo oo shacabka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda dhibaato ku haysa.
Si kastaba ha ahaatee, illaa lix askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maalintii shalay lagu xukumay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee maamulkaasi.
Ciidankaasi la xukumay ayaa lagu soo eedeeyay inay weerar ku qaadeen maxjarka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose, halkaasi oo ay ku dhaawaceen labo askari oo ka tirsan ciidanka booliis maamulka Jubbaland.